Ndiyivula njani ifayile ye-TMP CVR? - Faq
Eyona > Faq > Iifayile ze-tmp cvr-iimpendulo ezilula kwimibuzo
Iifayile ze-tmp cvr-iimpendulo ezilula kwimibuzo
Ndiyivula njani ifayile ye-TMP CVR?
Unokukhetha kwakhona ukujongaIfayile yeCVRukuhlalutya kunye nokuchonga ukuba kutheni inkqubo yeMicrosoft iphazamisile kwindlela yakho.
Cofa u'Qala, '' Zonke iiNkqubo 'kwaye emva koko ucofe u' Microsoft Word. '
Cofa iqhosha elithi 'Windows Office' ukusuka kwikona ephezulu ngasekhohlo kweLizwi emva koko ucofe 'Vula. '
Ngaba kulungile ukucima iifayile ze-TMP?
Zigcinwa kulawulo lwe- \_ AppData \_ Local \_ Temp \_. Ewe ungacima ngokukhuselekileyokubo.
Molo ku-YouTube. Le yiPraveen yeTechEmpty. Apha kweli nqaku, ndiza kukubonisa inkqubo yokususa i-cache okanye iifayile ze-junk ukucoca Windows 10 ikhompyuter ngesandla.
Ndikucebisa ukuba wenze ugcino lwazo zonke iifayile zakho ezibalulekileyo kwifolda yexeshana, ezinje ngeefayile ezinxulumene nomdlalo okanye idatha yomdlalo egciniweyo. Ke, ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqale. Kuqala, masicime idatha yohlaziyo lweWindows.
Ukwenza oku, vula i-drive C, emva koko yiWindows, emva koko usasazo lweSoftware kwaye ukhethe uKhuphele apha. Sine-1 gig yedatha yokuhlaziya yeWindows kwaye asiyidingi. Ukuba inkqubo ifuna ifayile, iya kuphinda ikhutshelwe kwakhona.
ayenze isebenze i-ofisi ngo-2007
Ke akukho ngxaki. Makhe ndicime yonke into apha kule folda yokukhuphela ukususa iifayile ze-junk ukucoca Windows 10 ikhompyuter ngoku yesibini masicime iifayile zethutyana kunye nokwenza kwangaphambili ukwenza oku, vula uvule ngokucofa ekunene kwi icon yewindows kwaye ukhethe 'ukubaleka' apha , Ngenisa i-% temp% Apha kwaye ukhethe ok, ngoku uza kubona zonke iifayile zethutyana kwaye uzicime zonke ngokugcina nawuphina umsebenzi owenzileyo wenza enye yezicelo. Vula ukuqhuba kwakhona ngokunqakraza ekunene kwi icon yeWindows kwaye ngoku chwetheza nje kwi-temp.
Le yenye indawo apho iifayile zexeshana zigcinwa khona. Zicime nje zonke ukucoca indawo yethutyana. Ngoku masicime iifayile zokukhetha kwangaphambili.
Ukwenza oku, vula ibhokisi yencoko yencoko ngokuchwetheza izitshixo zeWindows + R kunye nokuchwetheza kwangaphambili ngexesha elinye. Apha, khetha zonke iifayile kunye neefolda kwaye uzicime. Uyisusa njani ifayile ye-junk ukucoca Windows 10 ikhompyuter.
Ngoku elesithathu. Ukuba unengxaki noGcino lweWindows, yenze nje ngaphandle kokutshintsha iisetingi zeakhawunti yakho okanye ucime nayiphi na usetyenziso olufakelweyo. Ngokuvula ibhokisi yencoko yencoko yababini, chwetheza i-wsetet kwaye ucofe u-Kulungile, isikhawulezisi somyalelo siya kuza nescreen esingenanto.
Kuya kufuneka ulinde imizuzwana embalwa ukugqiba inkqubo yokuseta kwakhona. Nje ukuba ugqibile, uza kufumana uGcino lweWindows kwiConsole. Okwesine, iya kucoca iMicrosoft Edge kunye nembali yokukhangela kwi-Chrome ngelixa ndinazo.
Ungazama ukucoca imbali yokukhangela kuzo zonke izikhangeli onazo. Ngoku yiya kwisikhangeli se-Edge, uyivule kwaye ukhethe la machaphaza mathathu apha kwaye ukhethe Useto. Ngoku nqakraza embindini phantsi 'kweDatha yokukhangela idatha' kwi 'Khetha ekufuneka icinyiwe'.
Phawula into ofuna ukuyicima kwaye ukhethe u 'Cima'. Ngenye indlela, unokukhetha 'Soloko ucacile xa ndivala isikhangeli' ukuba ufuna ukucoca idatha yokukhangela rhoqo ukuze ususe iifayile ezingafunekiyo ukucoca Windows 10 ikhompyuter kwisikhangeli seChannel, landela la manyathelo okuCoca imbali yakho yokukhangela. Vula iChannel kwaye ukhethe la machaphaza mathathu ukwandisa ukhetho olukhoyo.
Khetha 'Izixhobo ezingaphezulu' kwimenyu, emva koko 'Cacisa idatha yokuKhangela'. Uya kufumana ifestile enokhetho olusisiseko, yiya kwithebhu 'ePhucukileyo' kwaye ukhethe ixesha, zeziphi izinto ofuna ukuzicima njl njl kwaye ucofe ku 'Sula idatha'. lo myalelo wokucoca i-cache ye-DNS.
Ukwenza oko, fumana cmd kwaye ucofe ekunene kuyo ukuze usebenze kwi-Command Prompt njengomlawuli. Ngoku faka lo myalelo ulandelayo; ipconfig / flushdns kwaye iya kuyicima ngokukhawuleza i-DNS cache. Okwesithandathu kukucoca i-hard drive kwaye uyivule, khetha i-hard drive ofuna ukuyicoca kwaye apha ndikhetha i-drive C.
Ngoku khetha iifayile ofuna ukuzicoca kwaye ukhethe ok, ziya kuthi emva koko zicoca iifayile ze-junk ezikwi-drive C. Eyesixhenxe kukukhulula isithuba kunye nenqaku lokubuyisela. Ukwenza oku, fumana indawo yokubuyisela kwaye uyivule.
Nje ukuba iNkqubo ibuyisele indawo iwindow, khetha i C drive kwaye ukhethe 'Qwalasela' ukukhangela indawo ebisetyenziswa kwindawo yokubuyisela. Ngoku ndinee-2 gigs apha kwaye konke okufuneka ukwenze kukucima ngokukhetha Cima kwaye ucofe u-Kulungile. Ngoku yakha indawo entsha yokubuyisela kwaye uyiqambe ngegama nantoni na oyithandayo.
Ndiyibiza ukuba ibuyiselwe apha kwaye iya kuthatha indawo encinci ngoku. Nantsi indlela ongasusa ngayo i-cache okanye iifayile ze-junk ukucoca Windows 10 ikhompyuter ngesandla ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na isoftware. Yiyo eyeli nqaku lifutshane.
Ndiyathemba ukuba ulifumene eli nqaku liluncedo. Ukuba uyayenza, nceda ucofe iqhosha u-'Like' kwaye ubhalise kulejelo ukuze ufumane amanqaku amnandi njengale. Igalelo lakho likhulu kuthi.
Le yimiqondiso yePraveen. Ndiyathemba ukukubona kwinqaku lam elilandelayo. Enkosi!
Ngaba ifayile ye-tmp yintsholongwane?
TMPiyaphunyezwaifayileIkhutshelwe kwaye isetyenziswe yiintsholongwane, Isaziso soKhuseleko lweMicrosoft Security. ... Inkohliso yeMicrosoft Security Essentials izama ukwenza oku ngokukhukhula ikhompyuter yakho ngezaziso ezivelelayo ezikuxelela ukuba ikhompyuter yakho yosulelekile.Sep 28 Ngo-2017
Onenote ukugcinwa kwendawo
Ndenza ntoni ngeefayile ze-TMP?
UninziIifayile ze-TMPayenzelwanga ukuba ivulwe. Ngelixa unokuvula ifayile ye-Ifayile ye TMPKwiMicrosoft Notepad (Windows) okanye omnye umhleli wokubhaliweyo, ifayile yeifayileayinakufundeka ebantwini. Ngokuqhelekileyo,Iifayile ze-TMPziyasuswa emva nokuba yeyiphi na:ifayileugqiba ukusebenzisa iifayile.
Ndifumana phi i-CVR * .tmp.cvr iifayile zexeshana?
Iifayile zethutyana zeCVR * .tmp.cvr zenziwe ziinkqubo zeOfisi yeMicrosoft kubandakanya i-Outlook, iLizwi, i-Excel, iPowerPoint, njl. Zikwindawo yabasebenzisi & lt; userid & gt; AppDataLocalTemp ifolda. Qho xa uqala inkqubo yeOfisi yeMicrosoft, iyakwenza i-CVR * .tmp.cvr enamanani ama-4 angafaniyo eHex embindini wegama lefayile njenge: CVRD5F9.tmp.cvr.
Yintoni iFayile yeXVR Temp kwimbonakalo?
Iifayile ze-CVR zeefayile zethutyana ezishiyekileyo ziinkqubo ezinje ngeMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkqubo ezivela kwiMicrosoft Office Suite. Fumanisa malunga neefayile zeCVR zesimo ngoncedo oluvela kubuchwephesha beenkqubo zolwazi, iilwimi zenkqubo, uphuhliso lwewebhu kunye nokhuseleko lwenethiwekhi kule vidiyo yevidiyo yasimahla. Ingcali: Lucas Mladek
Luhlobo luni lwefayile eyifayile yeCVR?
Uhlobo lwefayile yexeshana. Ukongezwa kwefayile ye-cvr kusetyenziswa ezinye iinkqubo ezivela kwiOfisi yeMicrosoft Office, njengeMicrosoft Outlook yolunye uhlobo lweefayile zazo zethutyana.
vba ecacileyo eyahlukileyo
Ngaba kukhuselekile ukucima ifayile yeCVR?
Iifayile ze ~ / $ zibizwa ngokuba ziifayile zabanini, ezenziweyo xa usebenza uxwebhu kwiLizwi, kwaye kufanele ukuba icinywe xa ugcina uxwebhu lwakho kwaye uphuma kwiLizwi. Iifayile zeCVR zenziwe nge-Outlook. Zigcinwa kulawulo lwe AppData Local Temp . Ewe ungazicima ngokukhuselekileyo.
isiseko sedatha yezityalo sigqwesa
Isiseko sedatha yezityalo sigqwesa- indlela yokufezekisa
Ngaba ikhuselekile kangakanani ifayile ye-Excel? UMicrosoft wenze inqanaba lokhuseleko ukuba lomelele kwaye ukuba ulahlekelwa ligama lokugqitha, ifayile iya kuba lilize. I-encryption esetyenziswe kwi-Excel 97 ukuya ku-2003 (. Xls) kwiifayile zelifa zi-RC4 xa kuthelekiswa ne-AES ekhuselekileyo kwiifayile ezivulekileyo zeXML ezisetyenziswe emva ko-2007 umzekelo (.29 mei 2020
iMedian ifs iphumelele
Ukuba uphambili - indlela yokuphatha
Ndizibeka njani iingongoma zebhola kwi-Excel? Eyona ndlela ikhawulezayo yokubeka uphawu lwebhulethi kwiseli yile: khetha iseli kwaye ucofe enye yezi zinto zidibeneyo usebenzisa ikhiphedi enenombolo kwikhibhodi yakho. I-Alt + 7 okanye i-Alt + 0149 yokufaka ibhulethi eqinileyo. Alt + 9 ukufaka imbumbulu engenanto. 4 apr. Ngo-2018
Uluhlu olujikelezayo lwe-Excel-izisombululo ezijolise kwinyathelo
Ugcwalisa njani ngokuzenzekelayo kwi-Excel ekwi-Intanethi? Cofa ubambe iqhosha lasekhohlo le mouse, kwaye utsale uphawu lokudibanisa ngaphezulu kweeseli ofuna ukuzizalisa. Kwaye uthotho luzaliswe ngokuzenzekelayo usebenzisa inqaku lokugcwalisa okuzenzekelayo. Okanye, yithi unolwazi kwi-Excel engafomathiweyo ngendlela oyifunayo, njengolu luhlu lwamagama.